သကျတနျ့ခြို: ကြောင်လူသားလား ကျားလူသားလား
ခံယူချက်ဟာ လူတစ်ယောက်ကို ရူးသွပ်သွား စေနိုင်လောက်အောင် ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါသတဲ့ ။ လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ သွားကိုလည်း ပြုပြင်ခဲ့တယ် သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းကိုလည်း ခွဲစိတ်ခဲ့တယ် မျက်နှာကိုလည်း ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ် Facial surgery ပေါ့ ။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သူ့ကိုယ်သူ လူကျား တစ်ကောင် Human tiger အဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ ဖြစ်ပါတယ် တဲ့ ။
Dennis Avner အသက် ၅၀ နှစ်ဟာ အမေရိကန် အင်ဒီးယန်းအနွယ်ဝင်ဖြစ်ပြီး သူဟာ သူ့ကိုယ်သူ ကြီးမားတဲ့ကြောင်တစ်ကောင်ဖြစ်ဖို့ အတွက် မရေမတွက်နိုင်တဲ့ ငွေကြေးပမာဏကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ် ။ သူ့ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တဲ့ အခါမှာတော့ သူ့ကိုယ်သူ ကျားတစ်ကောင်ဖြစ်ဖို့ အတွက် နည်းလမ်းကို ရှာဖွေဖို့အတွက်ပါပဲတဲ့ ။
Avner ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုမှာ သူ့ရဲ့ အပေါ်နှုတ်ခမ်းကို ခွဲခြင်း Bifurcation (splitting) နားရွက်ကို ခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်း ပါးမှာ စီလီကွန်ထည့်ခြင်း အရှေ့ဦးခေါင်းပိုင်း အစားသွင်းခြင်း သွားဖြည့်ဆည်းခြင်း Tooth filing တက်တူးထိုးခြင်း နှင့် မျက်နှာပြင်မှာ ပါးသိုင်းမွှေးများထည့်သွင်းဖို့အတွက် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။
ကြောင်လူသားဟာ ကျားတစ်ကောင်နဲ့တူအောင် နေ့စဉ် အသားတွေပဲစားခဲ့ပါသတဲ့ ။
Tonopah , Nevada မှ Avnerဟာ သူ့ကိုယ်သူ Stalking Cat ဆိုတဲ့ Indian နာမည် ကိုပြောင်းခဲ့ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ၀က်ဘ်ဆိုက် (http://stalkingcat.com/)မှာ ကျွန်တော်ဟာ Huron မျိုးနွယ်ဖြစ်ပြီးရှေးကျလှတဲ့ မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ အယူအဆအရ ကျနော့ကိုယ်ကျနော် ကျားတစ်ကောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲ ခဲ့ပါတယ်လို့ သူက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။ လူသားကျား aficionado ကတော့ သစ်ပင်တွေတက်ရာမှာ ပျော်မွေ့နေပြီး အသားကိုသာနေ့စဉ်စား သုံးပါတယ် ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျား တစ်ကောင်ရဲ့ နေထိုင်မှု ဘ၀ပါပဲလို့ဆိုပါတယ် ။ တဖန်သူက နေမင်းကိုကြည့်ပြီး ကျနော့်ကို ကျားတစ်ကောင်ရဲ့ ကိုယ်အပူချိန်နဲ့ သဘာဝကို ပေးတော်မူပါလို့လည်း တောင်းဆိုပြန်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ကြောင်တွေဟာ ကျားတွေကဲ့သို့ ၂၄ နာရီစလုံးမနေနိုင်ပါဘူး ။ ထို့အတူ လူတွေလည်း အတူတူပါပဲ ။ ကွာခြားချက်ကတော့ သူဟာ ရုံးတစ်ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်နေရပြီးကိုယ်ပိုင် တီဗွီလိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ Larry King live , VH 1's , Totally Obsessed နဲ့ Kerrang ကိုလည်း တည်ထောင်ထားပါတယ် ။ သူက အဓိကကွာ ခြားချက်ကတော့ ကြောင်တစ်ကောင်နဲ့ တူနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။
သူရဲ့ နောက်ဆုံးလူထုကို သူ့ပုံစံပြသဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်မှုတွေကတော့ Ripley's Believe It Or Not! museum အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး ဒီအပတ်မှာပဲ London's Piccadilly Circusမှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ကျားတစ်ကောင်ရဲ့ မျက်လုံးနဲ့ တူအောင်လို့ Dennis ဟာ အစိမ်းရောင် ခွဲစိတ်ထားတဲ့ Irises တွေကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ် ။ ကဲဒါဆို တကယ့်ဘ၀မှာ တော့ Cat Man ဟာ Cat Women ကိုဘယ်လို ရှာဖွေမှာပါလဲ ။ ဒါဟာ အရမ်းခက်ခဲပြီး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ ကျနော့်အတွက်ကတော့ မိန်းမအများစုလက်ခံနိုင်တဲ့ လူသားဆန်မှုထက် ကျားတစ်ကောင်ဖြစ်နေရခြင်းကို ပိုနှစ်သက်ပါတယ်လို့ သူက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။
စာရေးသူ....သက်တန့်ချို.....(၁၁း၀၆ ည ၂.၁၁.၀၉)
Posted by သက်တန့်ချို at 9:53 AM
သားကြီး November 3, 2009 at 12:52 PM
Angel Shaper November 3, 2009 at 1:39 PM
အလဲ့ သူ့ပုံလေး တင်ထားတယ်တော့်။။။။
ကျွန်တော် November 3, 2009 at 3:26 PM
သည်ပို့စ်လေးစိတ်ဝင်စားစရာဗျာ.. နောင်လည်းအသစ်အဆန်းလေးတွေ ရှာဖွေတင်ပေးပါဦး..လင့်ခ်ပါချိတ်ထားမယ်နော်..
Unknown November 3, 2009 at 3:58 PM
ဒီပို့စ်လေး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်။ အပြောင်းအလဲနဲ့ အထူးအဆန်းကိုမှ ကြိုက်တတ်သူတွေအတွက်ကတော့ အပြောင်းအလဲလေးက ပျော်စရာနေမှာနော်။
maylay November 12, 2009 at 10:35 AM
လူစင်စစ်က ကျားတိရစ္ဆာန် ဖြစ်ချင်ရတယ်လို့။။။။ အင်းးးး
ကျွန်တော်နှင့်ဟောက်ဆာဂျင်ဘ၀ (အပိုင်း ၄)
ဗီတာမင် B1 ချို့တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်သော သူငယ်နာရောဂါ (...
ကော်ဖီခွက်တွေနဲ့ ပုံဖော်ထားတဲ့ မိုနာလီဇာပန်းချီကား
အလွန်ကြီးမားသော ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှ နွားဘီလူးကြီးတွေ
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံး Iphone
ခေါင်း ၂ လုံးပါသော သတ္တ၀ါများ
ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံမှ မြင်ကွင်းတစ်ခု
ထူးဆန်းလှပတဲ့ USB လေးတွေ
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အထူးဆန်းဆုံး ကမ်းခြေ ၅ ခု
ကြီးမားတဲ့ Truck ကားကြီးတွေ
ထူးဆန်းသော စက်ဘီး ပုံသဏ္ဍာန်
ဒါလေးတွေကို ယုံပါတယ် ။